Malezia : ady amin’ny dengy sy ny tsikongonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2009 15:49 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Vokatry ny fitomboan'ny olona mararin'ny dengy dia manao fanentanana amin'ny ady amin'ity aretina ity ny fanjakana Maleziana. Araka ny fantatra tamin'ny volana lasa dia nahatratra 4 521 no isan'ny olona narariny ary 13 no matiny. Mampatahotra ny fiakaran'isan'ireo mararin'ny dengy. Tamin'ny taon-dasa dia nahatratra 49 335 ny isan'ny olona narary ary 112 no maty – ny ratsy indrindra tamin'ny tantaran'ny firenena.
Ankoatra ny dengy dia misy otrikaretina hafa koa miparitaka any amin'ny fanjakana maro any Malezia any dia ny tsikongonia. Manoratra mikasika ity viriosy kely tsy fantatra ity i Doctor2008 :
“Ity no aretina fantatra farany avy amin'ny otrikaretina ka afindran'ny moka. Raha variana amin'ny toe-draharaha maneran-tany ny ankamaroantsika dia misoko mangina kosa ity aretina ity, tsy hoe any amin'ny tany mafana (trôpikaly) ihany fa hatrany amin'ny tany lavitra koa toa an'i Italy. Ao Malezia fotsiny tamin'ny taona 2008 dia eo ho eo amin'ny 3 700 ny isan'ny marary fantatra. Ny tena mahagaga dia ny fahanginan'ny fampahalalam-baovao ary tsy ampy ny fampianarana omen'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fahasalamana mikasika ny tokony hatao.
Ny tsikongonia no aretina farany amin'ireo marobe fantatra fa entin'ny moka toy ny tazo, ny dengy, ny tazovony, ny tazo japône ary ny tazon'i Nely Andrefana, ary mahafaty olona maherin'ny 1 000 000 manerana ny tany.
Mitanisa ireo hetsika mafana mikasika ny dengy any Malezia i Elizabeth Wong. Nanangona vaovao mikasika ny dengy sy ny tsikongonia i Daddy-O avy amin'ny loharanom-baovao maro samihafa :
Nanakiana ny fahanginan'ny Ministeran'ny Fahasalamana nanoloana ny valan'aretina dengy i Lim Kit Siang tamin'ny taon-dasa. “Nokianina ny tsy fahafantaran'ny olona ny fahadiovana manoloana ny valan'aretina” :
“Vao mainka niharatsy ny toe-draharaha manoloana ny tsy fahampian'ny fanentanana ny vahoaka Maleziana mikasika ny fahadiovan'(ny manodidina). Ny fotaka sy ny fako dia tsy vitan'ny hoe mandoto ny fantsona, ny lakandrano ary ny renirano ihany, fa manentsina azy ireo koa. Ny rano miandrona no tena toerana fanatodizan'ny moka sy itomboan'ny moka Aedes.
“Raha mbola tsy mahafantatra ny fahadiovan'ny tontolo iainana ny olona dia tsy mahagaga raha tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny mararin'ny dengy, manaitra ny fanjakana maleziana”
Manaiky i Palmdoc fa “tsy tena ady” ity fanentanana hiady amin'ny dengy ity :
“Efa an-taonany maro no nisian'ny dengy teto amin'ny firenentsika. Ankehitriny dia miparitaka koa ny tsikongonia izay mbola afindran'ny moka Aedes hatrany. Efa nandre sy namaky ny tabataba manodidina azy ity isika taloha ka tsy mahagaga ny mamaky ankehitriny fa namoaka fanambarana mikasika ny ” ady amin'ny dengy” indray ny Minisiteran'ny Fahasalamana. Tsy vahaolana maharitra ny famendrahana fanafody mamono moka izay tsy mahafaty afa-tsy ny moka lehibe ihany, fa ny tena olana indrindra ary fantatry ny manampahefana izany dia ny fahabetsahan'ny rano miandrona izay toerana fanatodizan'ny moka.
“Mandra-pahatonga saina ny tsirairay dia manaiky aho fa marina ny tenin'i LKS ary izao atao izao dia asa ambava fotsiny ihany mba handrenesana azy”
Famendrahana fanafody any ambanivohitra Maleziana. Avy amin'ny bolongana As normal as I can be.
Mihevitra i M. Bakri Musa fa ireo injeniera tsy mpiasam-panjakana dia tokony hanampy amin'ity fanentanana amin'ny ady atao amin'ny dengy ity :
“Tokony hampiditra injeniera tsy miankina amin'ny fanjakana isika any amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana sy any amin'ny Ministeran'ny Asa, ary izany dia ankoatra ny mpitsabo any amin'ny toeram-pitsaboana sy any amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Raha mivoaka ny biraony hary fomba ireo injeniera ireo dia hahita ny fantsona tsentsina, ny ranom-potaka, ny lavadavaka feno bozaka ary ny ahi-dratsy. Raha tena mandinika sy mijery akaiky eny an-toerana ireo manam-pahefana ireo dia hahita ny paradisan'ny atody moka any anaty rano miandrona”
Mandrisika ny olom-pirenena i Ji Keon ao amin'ny bilaoginy ny amin'ny andraikiny amin'ny fanampiana amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny dengy :
Voalaza fa tsy avelan'ny mponina mamendraka fanafody famonoana moka eny amin'ny manodididina azy ireo ny tompon'andraikitra. Na izany aza, tsy nisy famonoana moka matetika tety amin'ny toerana misy anay tahaka ny isan-taona izay hanentanan'ny tompon'andraikitra ny mponina ny asam-pamongorana ireo moka mpitsetsitra ra ireo”
“Tsy azo ekena ny fitomboan'ny dengy sy ny tsikongonia mandritra ny fotoana maharitra. Asa haingana no ilaina hanajanonana ny olana ka tsy hivadihany ho zava-doza.
“Ny misoroka no tsara noho ny mitsabo. Tokony ho tsapan'ny vahoaka Maleziana ny andraikiny amin'ny famongorana ity fahavoazana ity. Aoka tsy avelantsika hihen-danja noho ny moka ny famokarantsika sy ny fahavononantsika indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao izay ilan'ny firenena antsika hanao ezaka isam-batan'olona mba hamelomana indray ny lafiny ekônômika”
Sary avy amin'ny Flickr-n'i Pedro Trindade ny eo amin'ny voalohany io